Ungayisebenzisa kanjani igumbi | Ota Bunkanomori
Imenyu yeHlathi yeNkcubeko yeDaejeon
Igumbi elinemisebenzi emininzi
Ikona yomboniso / isikwere
Isitudiyo soBugcisa 1.2.3
Malunga nolwazi olungenamqobo
<Isilumkiso> Indlela yeLottery (*) itshintshiwe ukuthintela usulelo olutsha lwe-coronavirus.
Isitudiyo sezemidlalo sesi-1
Zonke izitudiyo zomculo
Igumbi lokupheka / igumbi lobugcisa / igumbi laseJapan
Onke amagumbi okuhlangana / amagumbi okulinda
Indlela yeLottery Siza kwenza amaqashiso kwigumbi elinenjongo ezininzi ze-Ota Bunkanomori.
* Awunakho ukufaka isicelo kwi-Uguisu Net. IWarbler net
Ixesha lesicelo / indlela Ukwamkelwa kwamkelwa kwigumbi elinamacala amaninzi kumgangatho we-9 we-Ota Bunkanomori ukusuka ngo-20: 10 ukuya ku-00: XNUMX ngomhla we-lottery. Ukusukela nge-4th ukuya esiphelweni senyanga, iinyanga ezi-15 ngaphambi kwenyanga yokusetyenziswa, faka isicelo kwi-Uguisu Net okanye kwifestile nganye ye-Ota Ward.
Umhla weLottery Iinyanga ezi-6 zokuqala ngaphambi kwenyanga yokusebenzisa (1 ngoJanuwari kuphela) Iinyanga ezi-3 zokuqala ngaphambi kwenyanga yokusebenzisa (1 ngoJanuwari kuphela) Iinyanga ezi-4 zokuqala ngaphambi kwenyanga yokusebenzisa (1 ngoJanuwari kuphela) Usuku olu-3 kwiinyanga ezi-1 ngaphambi kwenyanga yokusebenzisa
Ixesha lokuqinisekisa Akukho Ukususela kumhla emva komhla we-lottery ukuya kwi-7 yenyanga enye (ukurhoxiswa kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo emva kwexesha)
Umhla wokugqibela wokuhlawula Ukusukela kumhla we-lottery ukuya kwi-15 yenyanga enye
(Irhoxisiwe emva kwexesha) Ukususela kumhla emva komhla we-lottery ukuya kwi-15 yenyanga enye
Indawo yolwamkelo lwesicelo
Ixesha lokufumana Ihlathi leNkcubeko iDaejeon
Ngo-9: 00 ukuya ku-19: 00 (kubandakanywa neMigqibelo nangeeCawa) Ihlathi leNkcubeko iDaejeon
Ngo-9: 00 ukuya ku-19: 00 (kubandakanywa neMigqibelo nangeeCawa)
Iindawo zokuhlangana zethutyana kunye neendawo zokupaka kwiwadi
Ixesha lokufaka isicelo Ukusukela kumhla emva komhla we-lottery ukuya kwiintsuku ezisi-7 ngaphambi komhla wokusetyenziswa Ukususela kumhla emva komhla we-lottery ukuya kumhla wokusetyenziswa Ukusukela kumhla emva komhla we-lottery ukuya kwiintsuku ezisi-7 ngaphambi komhla wokusetyenziswa Ukusuka kwi-3th yenyanga ye-8 iinyanga ngaphambi kwenyanga yokusebenzisa ukuya kumhla wokusetyenziswa (kwiintsuku ezi-3 phambi komhla wokusetyenziswa ukuba ufaka isicelo kwi-Intanethi)
Umhla wokugqibela wokuhlawula Nceda uhlawule ngexesha lokufaka isicelo.　 Ukuba ufaka isicelo kwi-Intanethi, iya kuba ngaphakathi kweentsuku ezili-14 ukusuka kumhla wesicelo.
(Nangona kunjalo, ukuba ingaphantsi kweentsuku ezili-17 ngaphambi komhla wokusetyenziswa, ukuya kwiintsuku ezi-3 ngaphambi komhla wokusetyenziswa)
Isitudiyo sezemidlalo sesi-2 (iNkundla yeSikwashi)
Ukwamkelwa kuyakwamkelwa ekufikeni kokuqala, kwindawo yokuqala e-Ota Bunkanomori ukusuka nge-3 kusasa kwiintsuku ezintathu ngaphambi komhla wokusetyenziswa. (Ukugcina umnxeba kunokwenzeka)
Emva kokwenza ugcino, nceda uthenge kwaye ufake isicelo setikiti kumatshini wokuthengisa ngomhla wokusebenzisa.
143-0024-2, embindini, Ota-ku, Tokyo 10-1
Isondlo / usuku lokuhlola / ukucoca kuvaliwe / kuvaliwe okwethutyana